Hay’ad u ololeeysaa xuquuqul aadanaha oo dalbatay in dowlada lagula xisaabtamo telefishinada la demiyay – The Voice of Northeastern Kenya
Hay’ad u ololeeysaa xuquuqul aadanaha oo dalbatay in dowlada lagula xisaabtamo telefishinada la demiyay
Mid ka mid ah hay’addaha u ololeeya xuquuqul aadanaha ayaa ka dhawajisay in dowlada laga doonayo inay bixiso khasaaraha soo gaaray warbaahinadii shalay hawada laga saaray .
Waxaa shalay inta uusan beerta xuriyada ee Uhuru Park isku dhaarin hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga hawada laga saaray seddex ka mid ah telefishinada maxaliga ee sida gaarka ah loo leeyahay ee kala ah KTN, Citizen iyo NTV.
Tallabadaasi ayaa waxaa ka sii horeysay in warbaahinta looga digay inay si toos ah u soo tabiso xaflada mucaaradka Nasa uu madaxda ugu sareeya ku dhaarinayo.
Hasa ahaate maamulayaasha warbaahinada oo ay hor kacayaan ururka ay ku bahobeen tafaftirayaasha ayaa arrinkaasi ka soo horjeestay oo cambareeyay.
Mr Henry Maina oo ah agaasimaha bariga Afrika ee hay’adda aanan dowliga ahayn ee Article 19 ayaa tallabada hawada looga saaray telefishinadaasi ku tilmaamay xadgudub ka dhan ah xuquuqul aadanaha.
Hay’addan ayaa u ololeysa xuriyatul qowlka waxayna arrinta lagu eedeynaya inuu ku dhaqaaqay maamulka isgaarsiinta ee dalka ku tilmaantay mid sharci darro ah.
Agaasimaha ayaa sheegay in tallbadaasi aysan ahayn oo keliya xadgudub loo geystay madax banaanida saxaafada balse sido kale in laga tallabsaday hannaanka wanaagsan ee maamulka.
Mid ka mid ah ururrada rayidka oo magaceedu loo soo gaabiyo CSRG ayaa sheegtay in maamulka CA uu sameeyay faragelintii ugu darneyd ee ka dhan ah warbaahinta tan iyo xiligii ay Kenya madax banaanida qaadatay.
Agaasimaha guud ee xarunta caalamiga ee xeerarka iyo la tacaalidda dagaalada Mr Ndung’u Wainaina ayaa in hawada laga saaro telefishino maxali ah ku micneeyay hanjabaad lagula kacay dimuqaradiyada.
Dhanka kale maxkamada sare ee dalka ayaa meesha ka saartay amar si ku meel gaar ah shaqada looga istaajiyay agaasimihii guud ee maamulka isgaarsiinta ee CA Francis Wangusi ilaa iyo inta laga soo gabagabeynaya dacwad maxkamada loo gudbiyay oo arrinkaasi looga soo horjeedo.
← Maraykanka oo ku baaqay in la soo afjaro khilaafka ka dhex jiro wadamada khaliijka
DHAGEYSO Kalonzo Musyoka oo faahfaahiyay sababta uu uga maqnaa dhaarintii Raila Odinga →